UNWTO: Ny fizahan-tany dia hery manerantany amin'ny fampandrosoana sy fampandrosoana
Home » Travel Associations News » UNWTO: Ny fizahan-tany dia hery manerantany amin'ny fampandrosoana sy fampandrosoana
Jona 18, 2019
Nivory tao Baku, Azerbaijan, ny Fikambanana Iraisam-pirenena momba ny fizahantany (UNWTO) ho an'ny Session 110 an'ny Filan-keviny mpanatanteraka (16-18 Jona). Nandritra ny fihaonana dia nanohana ny fivoaran'ny fikambanana sy ny drafitra ho avy ny Firenena mpikambana, araka ny voasoratra ny sekretera jeneraly Zurab Pololikashvili, ary niarahaba fatratra ny fandraisan'anjaran'i Etazonia satria manadihady ny mety hidiran'ny UNWTO indray.
Miaraka amin'ny fahatongavan'ireo mpizahatany iraisam-pirenena nitombo 4% tamin'ny telovolana voalohany tamin'ny taona 2019, taorian'ny fitomboan'ny 6% tamin'ny taona 2018, ny masoivohon'ny Firenena Mikambana tompon'andraikitra amin'ny fampiroboroboana ny fizahan-tany fizahan-tany tompon'andraikitra, maharitra ary azo ekena eran'izao tontolo izao dia nihaona tao Azerbaijan ho an'ny Session 110 of ny Birao Mpanatanteraka. Ny Konsily dia mampivondrona ireo firenena mpikambana ao amin'ny UNWTO ho an'ny dinika ambony momba ny làlan'ny sehatry ny fizahan-tany manerantany.
"Fahafinaretana lehibe tokoa ny eto amin'ny tanànan'ny Baku mavitrika ho an'ny Fihaonambe faha-110 an'ny Filan-kevitsika mpanatanteraka," hoy Andriamatoa Pololikashvili. “Ny Birao Mpanatanteraka dia manome topy maso momba ny hetsiky ny UNWTO sy ny fivoarany nandritra ny taona teo aloha, ary manome tolo-kevitra lehibe momba ny lalana ho avy. Ny fotoananay tao Baku dia nanolotra anay ny fotoana mety indrindra hiadian-kevitra momba ireo fanamby atolotry ny fiakaran'ny isan'ny fizahan-tany ankehitriny, ao anatin'izany ny famoronana asa bebe kokoa sy tsara kokoa ary amin'ny alàlan'ny fitondrana fitoviana lenta. Misaotra ny firenena mpikambana rehetra aho noho ny fanoloran-tenan'izy ireo amin'ny baikon'ny UNWTO ary misaotra an'i Etazonia aho noho ny fisian'izy ireo sy ny fisokafan'izy ireo amin'ny fahafaha-miverina hiara-hiasa amintsika hiasa amin'ny fizahan-tany ny fizahan-tany ho an'ny fitomboana sy fitoviana. ”
Andriamatoa Fuad Nagiyev, Lehiben'ny Sampan-draharahan'ny fizahan-tany ao amin'ny Repoblikan'i Azerbaijan, dia naneho ny fanohanany ny iraky ny UNWTO, tamin'ny fanamarihana fa “voninahitra” ho an'ny firenena ny voafidy handray ny fivoriana faha-110 an'ny Filankevitra mpanatanteraka.
"Ny hetsika UNWTO, ao anatin'izany ity Birao mpanatanteraka ity, dia sehatra lehibe hampiroboroboana ny fahafahan'ny fizahan-tany ary amin'ny famolavolana sy fampandrosoana fifandraisana tsara amin'ny UNWTO sy ireo mpikambana ao aminy," hoy Andriamatoa Nagiyev nanampy.
Fanatanterahana ny vinan'ny UNWTO momba ny fizahantany ho hery ho amin'ny tsara
Nankasitraka fatratra ny fandrosoana vita ny UN Member raha miasa i UNWTO manatanteraka ny vina fitantananana ankehitriny. Ny tena manokana, ny laharam-pahamehana miisa dimy miandany amin'ny baikon'ny sekretera jeneraly Pololikashvili dia ahitana ny fanaovana izay hahatonga ny fizahan-tany ho marani-tsaina kokoa amin'ny alàlan'ny fanekena ny fanavaozana sy ny fanovana nomerika ary ny firoboroboan'ny fifaninanana sy ny fandraharahana ao anatin'io sehatra io. Mandritra izany fotoana izany, ny fanaovana ny fizahantany ho loharanon'ny asa betsaka kokoa sy tsara kokoa, ary mpamatsy fampianarana ambony sy fanofanana no laharam-pahamehana iray amin'ny UNWTO.
Ny fivorian'ny firenena mpikambana tao Baku dia nampandrenesina ny fandrosoana natao mba hahatonga ny fizahan-tany ho feno, tsy misy filaminana ary fomba fiarovana sy fampiroboroboana ny lova ara-tsosialy sy kolontsaina ary ny fitohizan'ny tontolo iainana. Ho fanampin'izany, ny fandrosoana vita tamin'ny 'UNWTO Agenda ho an'ny Africa 2030' vao natomboka. Ny drafitra efa-taona feno fahasahiana dia mikendry ny fahafantarana ny mety ho fizahan-tany ho an'i Afrika, miaraka amin'ny fifantohana manokana amin'ny fizahan-tany ho mpamily ny fanalefahana ny fahantrana, famoronana asa ary fampandrosoana matihanina.
Fanamorana ny andrim-panjakana sy ny faharetana ara-bola
Ny Executive Executive dia nanohana ihany koa ny valiny ara-bola farany tsara sy ny fanavaozana ny rafitra napetraka teo ambanin'ny Sekretera Jeneraly, izay taratry ny ezaka mitohy hiantohana ny faharetan'ny toekarena maharitra.
Eo amin'ny sehatry ny andrim-panjakana dia namerina ny fanolorantenany ny fahasamihafana sy ny mangarahara ny UNWTO. Miroso amin'ny fandaminana ny Framework Convention on Ethics momba ny fizahantany ny fikambanana. Ity Fifanarahana ity dia mitondra ny UNWTO hifanaraka amin'ny ankamaroan'ny masoivohon'ny Firenena Mikambana hafa, ary hanome manokana ireo mpikambana mpikambana amin'ny torolàlana mazava amin'ny fanaovana ny sehatry ny fizahan-tany nasionaly ho fitomboana sy fampidirana.
Nankalazaina ny fihaonana tao Baku satria manomana ny fivoriambe faha-23 amin'ny Fivoriambenany ny UNWTO, izay hatao any Saint Petersburg, Federasiona Rosiana, ny volana septambra. Atao isaky ny roa taona, ny General Assembly no fivoriana avo lenta indrindra ataon'ny minisitry ny fizahantany manerantany sy ny sehatra tsy miankina manerantany.
Qatar Airways midona any Davao, Filipina
United Airlines dia mandefa codeshare miaraka amin'i Vistara
2021 Toerana fitsangantsanganana tsara indrindra any Etazonia no voatonona anarana